Positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography ပုံရိပ်ဖော် dopamine receptors ၏စွဲဆေးစွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံများ (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
စွဲလမ်း၏မျောက်မော်ဒယ်များ (2008) တွင် dopamine receptors ၏ Positron ထုတ်လွှတ် tomography ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ
ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ အောက်တိုဘာ 12, 2008; 363 (1507): 3223-3232 ။
အွန်လိုင်းဇူလိုင် 18, 2008 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0092
မိုက်ကယ်တစ်ဦးက Nader,* ရှင်ပေါလု W Czoty, ရောဘတ် W ကသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်နှင့် Natallia V ကို Riddick
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမူးယစ်ဆေးစွဲမှအားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်ရိုနှင့်ပြည်နယ် variable တွေကိုပေးရန် related တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ မျောက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ D ကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ2 ကိုကင်းစွဲအတွက် receptors ။ ဥပမာ D: အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေး2 ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်နှုန်းထားများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောသူတို့သည်အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကို, ကိုကင်းများ၏အလွဲသုံးစားမှု-related သက်ရောက်မှုမှအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် sensitivity ကို impact နိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင်နှစ်ဦးစလုံး D ကို2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဟော်မုန်းပမာဏအတွက်အတက်အကျအားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိုကဲ့သို့သောလက်အောက်ခံမျောက်နှင့်မှလက်ဝဲဖို့ကိုကင်းထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး shift နိုင်သည့်တစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူမှုအုပ်စုသို့တစ်ဦးကျူးကျော်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်တစ်ခုစူးရှသောဖိအားများ၏တင်ပြချက်ကစနစ်တကျဖက်ရှင်အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် လူမှုရေး variable တွေကိုနှင့်စူးရှသောဖိအားအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကြံပြုကြီးစိုးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လက်ျာ။ ပြောင်းပြန်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှင်သောအာကာသ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်လူမှုရေးရာထူးစူးရှသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ညာဘက်ဖို့ကိုကင်းထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် D ကိုကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏နေရာအနှံ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဦးနှောက် ဆက်စပ်. အ2 receptors ။
keywords: dopamine, D ကို2 receptors, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, လူမှုရေးအပြုအမူ, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ non-လူ့မျောက်ဝံများ
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ဆက်လက်WHO က 2004) ။ ယူအက်စ်အေခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.9 သန်းပုဂ္ဂိုလ်များအသက် 12 သို့မဟုတ်အထက်လက်ရှိကင်းအသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြု 2005 သန်းအမေရိကန်များ (၏မကြာသေးခင်ကခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ 2.4 အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးSAMHSA 2006) ။ ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း, 15-24 တစ်နှစ်ကင်းအဟောင်းယောက်ျားနှင့်အတူတသက်တာအတွေ့အကြုံ (5-13% မှာအစီရင်ခံခဲ့သည်WHO က 2004) ။ 2001 ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံအားလုံး၏ 56% တိုးအစီရင်ခံကင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်သတင်းပို့; ဥရောပအတွက်အရေအတွက်က (67% ခဲ့သည်WHO က 2004) ။ အတော်ကြာဝတ္ထု pharmacological နည်းလမ်း (ဥပမာစဉ်းစားလျက်ရှိသော်လည်းလက်ရှိတွင်ကင်းစွဲအဘို့အဘယ်သူမျှမဆေးပညာအအတည်ပြုကုသမှုရှိပါတယ် O 'Brien 2005; Elkashef et al။ 2007) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့သုတေသနအစီအစဉ်၏ကျယ်ပြန်ရည်မှန်းချက် Non-လူ့မျောက်မော်ဒယ်များအတွက်ကိုကင်းစွဲမှအားနည်းချက်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse ၏, အမူအကျင့် pharmacological နှင့် neurochemical ဆက်စပ်မှုဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသနမဟာဗျူဟာသည်ဤ variable တွေကိုတစ်ပိုကောင်းနားလည်မှုကိုကင်းစွဲများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုမဟာဗျူဟာများဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါ၎င်းရဝုဏ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ဂျိမ်း Mills ကအတွက်ကထောက်ပြထားသကဲ့သို့ 1965'': တစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးကူးစက်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်နှစ်ဦးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင် [တစ်] NY ရောဂါအပါအဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးခုလိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်ပြန့်ပွားဘို့စွဲ-မူတည် '' ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကဤ '' လိုအပ်ချက်များကို '(က' အေးဂျင့် 'ကို' အိမ်ရှင် '' နှင့် '' အခြေအနေတွင် '' ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြထားပါပြီO 'Brien 2006) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ဤသုံးပါး variable တွေကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ဝတ္ထုကုသမှုမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုကင်းအာရုံစိုက်နေစဉ်, ကလူမှုရေးအခြေအနေတွင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကိုအလေးပေးသောဤနည်းဗျူဟာများ, အလွဲသုံးစားအပေါငျးတို့သမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကင်း (တစ်သွယ်ဝိုက်-သရုပ်ဆောင် monoamine အဆိုပါ dopamine (DA) မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှဆှဖှေဲ့နှင့်အတူချည်နှောင်ထားတဲ့ agonist, serotonin (5-HT) နှင့် noradrenaline ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါသည်Ritz et al။ 1987; Woolverton & ဂျွန်ဆင် 1992) ။ အဆိုပါ DA system ပေါ်တွင်ကင်းအာရုံ၏မြင့်အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုဖြန်ဖြေလုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအပေါ်လေ့လာမှုအများစုသည်။ အတိုချုပ်, DA နျူကလီးယပ် accumbens အပါအဝင် striatum အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာစီမံကိန်းအတွက်ကနေအဆောက်အဦများမှဆဲလ်များနှင့်စီမံကိန်းသည် cortex မှ (Haber & McFarland 1999); ဤအလမ်းကြောင်းအားလုံးအကြိုးအပြုအမူတွေကို (အတွင်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီDi Chiara & Imperato 1988) ။ DA အဓိက DA Transporter များကတက်ကြွစွာလွှာမှဖယ်ရှားသည် synapses သို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကိုကင်းသည့် Transporter ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် extracellular DA ၏အဆင့်ဆင့်မြှခွငျးအားဖွငျ့ပြုမူ, DA receptors နှစ်ခု superfamilies မှ binding ဖြင့်၎င်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ထားတဲ့, D ကို1- နှင့် D2-like receptors (Sibley et al။ 1993) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံရိပ်အလုပ် D ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်2receptors နဲ့ imaging tool များကို -like [11ကို C] raclopride နှင့် [18အဆိုပါ D ကို၏ Subtype အကြားခွဲခြားမက F] fluoroclebopride (FCP),2 superfamily (Mach et al။ 1993) ။ ဒါ့အပြင်ဆက်စပ်မှု၏: D ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်2 positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ligands အကျူးသို့မဟုတ် postsynaptic D ကိုအကဲဖြတ်နေကြ2receptors -like ။ အလုပ် lesioning အပေါ် အခြေခံ. (Chalon et al။ 1999), ကျနော်တို့: D အတွက်အပြောင်းအလဲများကို hypothesize2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအဓိကအား postsynaptic: D ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း2 အဲဒီ receptor function ကို (ကြည့်ရှု Nader & Czoty 2005).
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအလွဲသုံးစားမှုအလားအလာမှဦးဆောင်ကြောင်းကိုကင်းများ၏ pharmacodynamics နှင့် pharmacokinetics သို့သုတေသန DA စနစ်နှင့်ဆုလာဘ်ယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်သိရသည်။ ကဲ့သို့သောနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုခြင်း Vivo အတွက် ခွဲစိတ်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပစ်မှတ်ထား cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် microdialysis, ကိုကင်း (ကြည့်ရှုအားဖြည့်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ယုံကြည်သည်ဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် extracellular DA ၏အဆင့်ဆင့်ခြီးမွှောပြထားပြီး Bradberry 2000; Czoty et al။ 2002; Howell & Wilcox 2002) ။ လူသားမြားသညျတှငျ, ထိုကဲ့သို့သောပေအဖြစ် Non-ထိုးဖောက်ဦးနှောက်ပုံရိပ်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. DA နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမြှအကြားဆက်ဆံရေး (ဆန်းစစ်ခဲ့သည်Volkow et al။ 1999) ။ ကြောင်းလေ့လာမှုမှာတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးအုပ်ချုပ် [11postsynaptic DA-D ကိုမှချည်နှောင်ထားတဲ့ကို C] raclopride,2 receptors နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားတစ်ဦးချင်းစီအတွက် DA ကြောင့် radiotracer ၏ရွှေ့ပြောင်းခံရတိုင်းတာ။ ကိုကင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤတစ်ဦးချင်းစီမှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရနိုင်သောကြောင့်, စုံစမ်းစစ်ဆေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက်ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ထားပြီးအခြားသွယ်ဝိုက်-သရုပ်ဆောင် DA agonist, methylphenidate, (ဥပမာအသုံးပြုခဲ့ Johanson & Schuster 1975; Volkow et al။ 1999) ။ DA ခြီးမွှောနှင့်ရွှေ့ပြောင်းဖို့ methylphenidate များ၏စွမ်းရည်များအကြားတစ်ခုစနစ်တကျကြားဆက်ဆံရေး [ရှိခဲ့သည်11ကို C]: D ကနေ raclopride2receptors နှင့် '' မြင့်သော '' ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများများ၏ပြင်းထန်မှု -like ။ အရေးကြီးတာကတစ်ဦးမွငျ့မားသတင်းပို့မပြုခဲ့သောဘာသာရပ်များအတွက် methylphenidate DA ခြီးမွှောခဲ့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ neurobiological ပစ်မှတ်က်ဘ်ဆိုက်များမှာကိုကင်းများ၏တိကျသောလုပ်ရပ်များ၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်မှုရှိနေသော်လည်းအဲဒါကိုကင်း၏ထင်ရှားသောအလွဲသုံးစားမှု-related သက်ရောက်မှုရိုးရှင်းစွာမူးယစ်နှင့်အဲဒီ receptor အကြား pharmacological interaction ကအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ကြသည်မဟုတ်သောငါတို့အဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်။ တိရစ္ဆာန်တို့ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှိုင်းယှဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် Non-ဆက်ပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်လေးနက်ကွဲပြားခြားနားမှု (ရှင်းလင်းစွာရှိပါတယ်Dworkin et al။ 1995; Stefanski et al။ 1999; Bradberry 2000) ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထို့အပြင်, ကိုကင်းရရှိနိုင်မှုများ၏အချိန်ဇယားကိုကင်းထိတွေ့မှု၏ CNS အကျိုးဆက်များအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသော Non-လူ့မျောက်ဝံများ, အထူးသ, မျောက်တွေကို (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများMacaca mulatta) သို့မဟုတ် cynomolgus မျောက် (Macaca fascicularis) ။ မြောကျမောငျးမမြိုးနှင့်အတူဤဟောငျးကမ္ဘာ့ဖလားမျောက်ပြီးတော့ biomedical သုတေသနများတွင်အသုံးပြုနိုင်လူသားတို့အများဆုံးနီးကပ်စွာ phylogenetically related မျိုးစိတ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်တိကျစွာလူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များမှသည်ယဘေုယကြှနျတျောတို့၏စွမ်းရည်ကိုဘာသာရပ်များအဖြစ်မျောက်များကို အသုံးပြု. တိုးမြှင့်လျက်ရှိ၏ ဤ (ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်Nader & Czoty 2008) ။ မျောက်နှင့်ကြွက် dopaminergic စနစ်များအကြားမှတ်တမ်းတင်ကွဲပြားခြားနားမှု (ရှိပါတယ်Berger et al။ 1991; Joel & Weiner 2000), D ကိုမှာ DA ဆှဖှေဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပါအဝင်1- နှင့် D2-like receptors (ပေါင်းပင် et al။ 1998ဦးနှောက် function ကိုအတွက်ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု၏) အဖြစ်သက်သေအထောက်အထားများ (ဥပမာ လီယွန် et al။ 1996) နှင့်ကိုကင်း (ဥပမာအပါအဝင်သွယ်ဝိုက်-သရုပ်ဆောင် DA agonists များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက် ရောဘတ် et al။ 1999; Lile et al။ 2003) ။ ကြွက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားထားတဲ့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပါအဝင်အများအပြားမူးယစ်ဆေး, မျောက်နှင့်လူသားများတွင်အလားတူ pharmacokinetic profile များကိုရှိသည်ညွှန်ပြဒေတာ, (ဥပမာလည်းရှိပါတယ် ဘဏ်များ et al။ 2007; မြင် Weerts et al။ 2007 ) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။
မျောက်လည်း (ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင်လူမှုရေး variable တွေကိုများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ခွင့်ပြုမော်ဂန် et al။ 2002; Czoty et al။ 2005); ဒီလေ့လာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမှတစ်မူထူးခြားသော Translational အစိတ်အပိုင်းသည်။ လူမှုရေးအဆင့်ဆင့် (ကအုပ်စုလေးခုမျောက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏လူမှုရေးရာထူးဆိုလိုသည်မှာ) (မျောက်အကြားတိုက်ပွဲတွေ၏ဆုရရှိသူမှတ်တမ်းတင်နေဖြင့်ဆုံးဖြတ်Kaplan et al။ 1982) ။ ပထမဦးဆုံးအဆင့် ( 'ကြီးစိုး') မျောက်အခြားသုံးမျောက်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲတွေလည်းအနိုင်ရသောမျောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒုတိယအဆင့်မျောက်ဒါပေါ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်မျောက်ဆန့်ကျင် မှလွဲ. အားလုံးတိုက်ပွဲတွေလည်းအနိုင်ရရှိနှင့်။ ကလောင်အမည်အားလုံးကိုတခြားသူတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှုံးသောမျောက်နိမ့်ဆုံးအဆင့် ( 'လက်အောက်ခံ') မျောက် designated ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အကြီးအကျယ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသုတေသနအတွက်သတိမမူခဲ့သတဲ့အိမ်ရှင်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအများစုအထီးဘာသာရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပြီးနေစဉ်, နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးအမူအကျင့်, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် neurochemical လုပ်ရပ်များအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့အကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား (ရှိLynch et al။ 2002; Lynch 2006; Terner & က de ကျေး 2006) ။ အရေးကြီးသည်မှာဤအစီရင်ခံချက်များအရလိင်ကွဲပြားမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထက် ကျော်လွန်၍ schizophrenia၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်စိတ်စွဲလမ်းမှု (compulsive disorder) အပါအ ၀ င်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအများစုပါဝင်သည်။ Seeman 1996; Wieck et al။ 2003) ။ အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များအတွက်, ရာသီစက်ဝန်းအဆင့် (တွေ့မြင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် Terner & က de ကျေး 2006) ။ အမျိုးသမီးမျောက်များ (အီစထိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်းအတွက်အတက်အကျအမျိုးသမီးများ၏သူတွေကိုပုံနဲ့တူတဲ့အတူဥပမာအနေနဲ့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 28 ရက်ကြာရာသီစက်ဝန်းရှိတယ် Jewitt & Dukelow 1972; Appt 2004), အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများလေ့လာရန်အတွက်သူတို့ကိုစံပြဖြစ်စေရန်။ ဤစာတမ်းတွင်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသော်လည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လေ့လာမှုများသည်လူမဟုတ်သောမျောက်များအသုံးပြုခြင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မက္ကကိတ်များတွင်ကိုယ်ဝန်ကာလသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆ လဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ဝန်နှင့်နီးကပ်ပြီးကြွက်မော်ဒယ်များထက်များစွာပိုကြာသည် (Sandberg & Olsen ၁၉၉၁).
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ခေါင်းစဉ်မှဆီလျော်၏, ငါတို့မကြာသေးမီကရာသီစက်ဝန်းအဆင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက် DA-D ကို၏အစီအမံစုံစမ်းစစ်ဆေး2 အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Czoty et al။ 2008) ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်အဖြစ်, D ကိုအကြားဆက်ဆံရေးရှိပုံပေါ်2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ထို့ကြောင့်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်လွှမ်းမိုးမှုလျှင် D ကို2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်, ဤ (လကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်စမ်းသပ်ပြီးအမျိုးသမီးကိုကင်းများ၏အလွဲသုံးစားမှု-related သက်ရောက်မှု (သို့မဟုတ်အခြားနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ) တွင်ခြားနားချက်များများအတွက်အဓိကယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်Sofuoglu et al။ 1999) ။ အမျိုးသမီးသုံးပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများ D ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ2 ရာသီစက်ဝန်းတစ် function ကိုအဖြစ်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, သုံးကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ Wong က et al။ (1988) luteal အဆင့်သာရှိပြီးပြည်ပမှအဆိုပါ follicular အတွက်စမ်းသပ်ပြီးအမျိုးသမီးများ striatum အတွက်အနိမ့် radiotracer လွှာမှဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုမှာတော့သူတို့အောက်ပိုင်း D ကိုတွေ့ရှိရ2 follicular အဆင့်သာရှိပြီးပြည်ပမှအဆိုပါ luteal အတွင်းအမျိုးသမီးများအတွက်အဲဒီ receptor အဆိုပါ putamen အတွက်အစီအမံများ (သို့သော်မပေး caudate နျူကလိယသို့မဟုတ် ventral striatum) (Munro et al။ 2006) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Nordstrom et al။ (1998) : D အတွက်ရာသီစက်ဝန်း-မှီခိုမူကွဲမရှိသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ2 ငါးအမျိုးသမီးတွေအတွက် putamen အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ အများအပြားအချက်များစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်နှင့်အမျိုးသမီးမူးယစ်ဆေးသမိုင်းအပါအဝင်, ဤမတူညီသောရလဒ်များကိုများအတွက်အကောင့်နိုင်ဘူး။ အရေးကြီးတာကအဲဒီအချက်များတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ခုနစျပါးစမ်းသပ်ထားသည့်နုံ, ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်စက်ဘီး, ငါတို့ကြောင်း: D တွေ့ရှိခဲ့2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ခန့်။ 13%) သိသိသာသာခဲ့အောက်ပိုင်းဟာ follicular အဆင့်အတွက် luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းလေ့လာခဲ့အတူတူပင်မျောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (Czoty et al။ 2008) ။ ထိုကဲ့သို့သောရလဒ်ကိုရာသီစက်ဝန်း၏အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မှာမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမှ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဟာ host အချက်အဖြစ်ဟော်မုန်း milieu ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။ ထို့အပြင်ဤဒေတာကိုအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာမှုများ longitudinal လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတာတာတို့ကရာသီစက်ဝန်းအတက်အကျများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု minimize သင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေမှာတော့ကျနော်တို့အားလုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု, စမ်းသပ်သမိုင်းနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုလွှမ်းခြုံအဖြစ်ဆက်စပ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဤစာတမ်းသည်, ကျနော်တို့ကိုကင်းအားဖြည့်အကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုမော်ဒယ်များ၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်နှင့် Non-လူ့မျောက်လူမှုရေးအပြုအမူဖို့အခြေအနေတွင်ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။ အားဖြည့်များ၏အချိန်ဇယားကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏မော်ဒယ်များဖော်ပြတဲ့အခါ, အရေးပါသောဂုဏ်ထူး '' သက်ရောက်မှု '' အားဖြည့်ခြင်းနှင့် '' အစှမျးသတ်တိ '' အားဖြည့်အကြားလုပ်ရပါမည်။ တစ်ဦးကအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရိုးရှင်းစွာမူးယစ်တင်ဆက်မှုမှဦးဆောင်တုံ့ပြန်မော်တော်ယာဉ်တင်ဆက်မှုမှဦးဆောင်တုံ့ပြန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာဖြစ်ပေါ်ဆိုလိုသည်။ ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ထားပါတယ်သောမူးယစ်ဆေးအဘို့, ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး၏အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်ဦး-ပုံသဏ္ဍာန် approximates ။ အကြောင်း, တုံ့ပြန်အတွက်ထိုး-မှီခိုတိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ်တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုကိုယ်လက်အင်္ဂါလည်းမရှိ, တုံ့ပြန်၏အထွတ်အထိပ်နှုန်းထားများအတွက်ရလဒ်များနှင့်တုံ့ပြန်၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများအတွက်ထိုးရလဒ်အတွက်တိုးပွါးရသောတစ်ဦးဆင်းကိုယ်လက်အင်္ဂါ (မြင်သောတစ်ဦးထိုးဖြစ်ပါသည် Zernig et al။ 2004) ။ အတော်ကြာအချက်များကတော့ကွေး၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောကြောင့်, ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေထိုး-တုံ့ပြန်မှုခါးဆစ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အရာမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ပြန်ချက်များစေရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး '' ကိုပိုမိုအားဖြည့် '' ဖြစ်ပါတယ် (Woolverton & Nader 1990) ။ သို့သော်အခြားသောအချိန်ဇယားအစွမ်းသတ္တိကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအကဲဖြတ်အောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်; ထိုအကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့လိမ့်မည်။ ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်အဓိကအချက်အားဖြည့်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအဘို့ထိုသူတို့အသင့်လျော်ဆပ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်အတွက်စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုနှိုင်းယှဉ် (ဆိုလိုသည်မှာရိုးရှင်းစွာ Self-စီမံခန့်ခွဲကိုကင်း) ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးများအတွက်ကုသမှု options များထည့်သွင်းစဉ်းစားရသောအခါဤသို့သောဂုဏ်ထူးကလူနာခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး (s) ကိုထားပြီးဘယ်လောက်မူးယစ်ဆေးဝါးအရေးအလွဲသုံးစားမှု-ပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်မှုသည်သူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားခဲ့သလဲ Volkow et al။ (1999) DA-D ကို၏အဆင့်ဆင့်ကိုတွေ့2 ပေနှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကြိုတင်လေ့လာမှုဖို့အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးဝါးပမာဏအပေါ်ထက်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြာချိန်ပိုမိုမှီခိုခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဟာအပြုအမူတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူရေးမှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြု, ကင်း၏ဆေးဝါးဗေဒ၏လွတ်လပ်သော, ကိုကင်းချိုးဖောက် DA အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်အစီရင်ခံပြောင်းလဲမှုများကိုအထောက်အကူပြုနှငျ့ပတျဝနျးကငျြကဦးနှောက်အပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်သောအယူအဆထောက်ခံနိုင်ဘူး။
Non-လူ့မျောက်ဝံများ, PET ပုံရိပ်နှင့်အားဖြည့်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားများအသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုနှိုင်းယှဉ်ရှာကြံမူးယစ် (၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးCzoty et al။ 2007a,b) ။ တိုက်ရိုက်ကဒီအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့, 12 စမ်းသပ်မှုတွေအနုံမျောက်တွေကိုသည့် D ကို အသုံးပြု. အခြေခံပေ Scan ဖတ်လက်ခံရရှိ2 အဲဒီ receptor ligand [18F ကို] FCP ။ ဤအမျောက်ခြောက်ထို့နောက်ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယား, ကိုကင်းနောက်ဆုံးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သည်အထိမူးယစ်ဆေးရှာ 60 မိ session ကိုတစ်လျှောက်လုံး conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည့်အတွက်အားဖြည့်တစ်ဦးအလွန်ပိန်ကြုံသောအချိန်ဇယား (အောက်တွင် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်Katz 1980) ။ နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားသတ်မှတ်ချက်ဘောင်,3ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်မှုလက်အောက်တွင် မိ (fixed ကြားကာလ; FI3မိ) ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဒသမပြီးစီးခဲ့ FI (ဆိုလိုသည်မှာ fixed အချိုး 10) နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပြောင်းလဲမှု (S) မကင်းတင်ဆက်မှုအတွက်ရလဒ်ထုတ်လုပ် (designated FR 10 [FI3မိ: S က]) ။ အစည်းအဝေးများ 0.1 (နှစ်ခုကိုကင်းဆေးထိုးပြီးနောက်အဆုံးသတ် mg kg-1 ဆေးထိုး-1) ။ ထို့ကြောင့်ဤတိရိစ္ဆာန်များတစ်ခုကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံသမိုင်းရှိခဲ့ပေမယ့်ကင်းစားသုံးမှု၏အလွန်နိမ့်အဆင့်ဆင့်။ ခြောက်လမျောက်၏ဒုတိယအုပ်စုတစ်စုကိုကင်းတင်ဆက်မှုတစ်ခု FR 30 အချိန်ဇယားအောက်တွင်တုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ 30 ၏ထိုး 0.3 အထိလက်ခံရရှိနိုင်မည်ဒီအုပ်စုအခြေအနေများ '' မူးရူး '' access ကို-မျောက်ပုံစံစီစဉ်ခဲ့ကြသည် mg kg-1 တစ်နေ့လျှင်ကင်းနှစ်ကြိမ်, တစ်ပတ်ကို2ရက်။ ထို့ကြောင့်မျောက်၏အခြားအုပ်စုဆွေမျိုး, ဘာသာရပ်များ၏ဤအစုကိုပိုပြီးကင်းလက်ခံရရှိပေမယ့်မူးယစ်ဆေးရှာကြံတစ်ပတ်ကိုသာ2ရက်နေ၏။ ကျနော်တို့ကိုကင်းဖို့မူးရူး access ကို: D အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချမှုတွေ့ရှိခဲ့2 အခါတိုင်းအမှတ်မှာအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားအောက်တွင် '' ရှာကြံမူးယစ်ဆေး '' သိသိသာသာ D ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူးစဉ်2 1 တစ်နှစ်ကျော်ကအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်: D ထဲမှာလျှော့ချကြောင်းအကြံပြု2 လူသားမြားသညျတှငျတှေ့မွငျရရှိနိုင်အဓိကအား DA အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကိုကင်းများ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ခဲ့ကြသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် interaction က× (ဈ) ORGANIZATION: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1
မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်များ၏သိမ်းယူမှု (ဥပမာပြည်နယ် variable တွေကို) ကိုတစ်ဦးချင်းစီ (ဆိုလိုသည်မှာရို variable တွေကို) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်၏အင်္ဂါရပ်များကလွှမ်းမိုးနေသည်။ မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ဖို့ sensitivity ကိုမှရို variable တွေကိုများ၏ဆက်ဆံရေး၏ပထမလေ့လာချက်တစ်ခုမှာနေဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည် Piazza et al။ (1989) သောကြွက်၏အုပ်စုနှစ်စုအနေနဲ့ပွင့်လင်း-Field ယန္တရားအဖြစ်မြင့်မားသောန (HR) သို့မဟုတ်အနိမ့်န (LR) တွင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံပြီးမတူညီခဲ့ကြသည်။ ကြွက် indwelling သွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့်အနိမ့်ဆေးများမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ dတစ်ဦး FR အချိန်ဇယားအောက်တွင် -amphetamine ။ ဝယ်ယူ HR ကြွက်များ dLR ကြွက်များထက်နိမ့်ဆေးများမှာ -amphetamine Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ဟာမွေးရာပါအမူအကျင့်လက္ခဏာတစ်ခုဖွင့်လှစ်သောလယ်၌အမည်ရ, locomotor လှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံပြီးအားနည်းချက်များ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့အချိန်ဇယားများအသုံးပြုမှု။
မကြာသေးမီကဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများ (ကိုကင်းချိုးဖောက်မြင့်မားဖြစ်ပြနေတဲ့ရို '' Impulse '' နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူကိုလေ့လာခဲ့ကြMoeller et al။ 2002) ။ ကြွက် (ပိုမိုလျှင်မြန်စွာလျော့နည်းထကြွလွယ်သောကြွက်များထက်ပိုပြီးထကြွလွယ်သောဝယ်ယူကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာDalley et al။ 2007). ပယ်ရီ et al။ (2005) Impulse မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု precedes ရှိမရှိအမှာစကားပြောကြားသည်။ တစ်ဦး FR 1 အရေးပေါ်အောက်မှာအခြားလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်သုံးအစားအစာများ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်ရလဒ်အနေဖြင့်ကြောင်းလေ့လာမှုများတွင်ကြွက်တစ်ဦး FR 1 အရေးပေါ်အောက်တွင်တဦးတည်းလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ထားတဲ့အတွက်နှောင့်နှေးလျှော့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ, တဦးတည်းအစားအစာတောင်၏ချက်ချင်းဖြန့်ဝေမှု တစ်ဦး variable ကိုနှောင့်နှေးပြီးနောက်လုံးလေးများ။ ကြွက်ချက်ချင်း option ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, နှောင့်နှေးတန်ဖိုးကအခြားရွေးချယ်စရာအဘို့အလာမယ့်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ယုတ်လျော့; နှောင့်နှေး option ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, နှောင့်နှေးတန်ဖိုးကိုလာမည့်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကယုတ်ပြုပြင်နှောင့်နှေး (MAD) တန်ဖိုးကိုစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးအားလုံးနှောင့်နှေးတန်ဖိုးများကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကြွက်ဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။ အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ပယ်ရီ et al။ (2005)အဆိုပါ MAD ဟာတစ်ဦးချင်းစီကြွက်လျှော့သောအတိုင်းအတာအထိနှောင့်နှေးအစားအစာစစ်ကူတစ်အရေအတွက်အတိုင်းအတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သေးငယ် MAD တန်ဖိုးများကိုပိုမိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူညွှန်ပြနေချိန်တွင်ရှည်နှောင့်နှေးကိုယ်စားပြုပိုမိုမြင့်မား MAD တန်ဖိုးများကို, အနိမ့် Impulse ၏ညွှန်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်များ MAD တန်ဖိုးများပေါ်တွင် အခြေခံ. (အသီးသီး HiI နှင့် Loi) အုပ်စုနှစ်စု, အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့ Impulse သို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းဝယ်ယူလေ့လာခဲ့တဲ့အခါ HiI တိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူခြင်းနှင့် Loi ကြွက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်မှာ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှတစ်ဦးချင်းစီ predispose နှင့်ဤတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. လေ့လာနိုင်အပြုအမူစရိုက်များရှိပါတယ်သောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုတစ်စုနောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ဘို့ရို variable တွေကိုနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်. မျိုးရိုးဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင် interaction ကလေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအများကြီးကြိုတင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်လူသားတွေအတွက်ဖြေကြားမရနိုငျသောလက်တွေ့အချက်အလက်မေးခွန်းများကိုအတွက်ကွာဟချက်ကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ရန်အတွက်ကင်းထိတွေ့ခံရခြင်းမှကင်း-နုံမျောက်တွေကိုကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဥပမာ, ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံး: D ၏အောက်ခြေအဆင့်ရှိ2 ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များထက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Volkow et al. 1990, 1993; Martinez et al။ 2004) နှင့် D ကို၏အနိမ့် Basal အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ပိုမိုအားဖြည့် methylphenidate တွေ့ရှိခဲ့Volkow et al။ 1999) ။ ဒါဟာအနိမ့်: D ဟုတ်မဟုတ်မသိရ2 အဆင့်ဆင့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်သို့မဟုတ်ကင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက်အပ်နှင်းတဲ့ Pre-ရှိပြီးသားအင်္ဂါရပ်ရှိကြ၏။ မေးခွန်း: D ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်တစ်ခုရိုအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဤမေးခွန်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ Basal: D ဆက်နွယ်နေကြောင်း2 ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနောက်ဆက်တွဲနှုန်းထားများနှင့်အတူကင်း-နုံမျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ ဒုတိယအကျနော်တို့: D အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုကိုလေ့လာ2 ကိုကင်းအားဖြည့်သည်ဤအဆင့်ကိုလျော့ကျခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လက်လှမ်း၏ 1 တစ်နှစ်ကျော်ကကင်း-နုံမျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Nader et al။ 2006) ။ တွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာပြသ ကိန်းဂဏန်း 1။ အစပိုင်းမှာကင်း-နုံမျောက်ဟာ D နဲ့ scan ဖတ်ခဲ့သည်2 အဲဒီ receptor ligand [18F ကို] FCP ပြီးတော့တစ်ဦး FI3အောက်မှာတုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြား အစားအစာတင်ဆက်မှု၏မိအချိန်ဇယား။ တုံ့ပြန်တည်ငြိမ်ခဲ့သည့်အခါ, တစ်ဦးချင်းစီမျောက်ခွဲစိတ် 0.2 (တစ်ဦး indwelling သွေးပြန်ကြောပြွန်နှင့်အတူကင်းတဲ့ဆေးထိုးထညျ့ခဲ့သညျ mg kg-1 ဆေးထိုး-1) အစားအစာများအတွက်အစားထိုးခဲ့ပါတယ်နှင့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အရေးပါသောအချက်တို့သည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်း-မျောက်ရိုးရှင်းစွာမူးယစ်ထိတွေ့ခဲ့ကြခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်အောက်မှာမျှလေ့ကျင့်ရေးရှိကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခြေခံ: D အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏နှုန်းထားများ (ကိန်းဂဏန်း 1a) ။ အနိမ့် D နဲ့မျောက်2 မြင့်မားသော D နဲ့မျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာအဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်း2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ရန်အလွန်ဆင်တူ Volkow et al။ (1999) Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် methylphenidate ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါတို့သည်လည်း D ကိုတစ်ဦး 1 နှစ်ကာလအတွင်းကင်းစားသုံးမှုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောကြောင်းတွေ့ရှိရ2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု D ကိုအဘယျကနဦးအဆင့်ဆင့်၏မသက်ဆိုင်ဘဲမူလလျော့နည်းသွား2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (တစ်ဦးချင်းစီမျောက်များအတွက်ခဲ့ကြသည်ကိန်းဂဏန်း 1b) ။ ထို့ကြောင့်ကြောင့်နိမ့်: D ပုံပေါ်2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းအားဖြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်စေသည်နှင့်ကိုကင်းမှဆက်လက်ထိတွေ့မှုထပ်မံသူတွေကိုအဆင့်ဆင့်လျော့ကျ (Nader et al. 2002, 2006).
(aအခြေခံ D ကိုကြား) ညမညသဘောတရား2 အထီးမျောက်တွေကိုအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်နှုန်းထားများ။ (bတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကင်းစားသုံးမှုနဲ့ D အတွက်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်းများထဲမှမျောက် (R-1241) မှ) ကိုယ်စားလှယ်ဒေတာ2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ ...
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များရှင်းလင်းစွာ D ကိုဤကိစ္စတွင်အတွက်, ဇီဝဗေဒရို variable တွေကိုရှိပါသည်သောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားနည်းချက်။ ကျနော်တို့: D အပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုများ၏သက်ရောက်မှုကိုလည်းလေ့လာကြပါပြီ2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ရန်ဤသက်ရောက်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိအားနည်းချက်။ ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲကနေအစောပိုင်းကအလုပ် D ကိုအကြားဆက်ဆံရေးသရုပ်ပြ2 လက်အောက်ခံမျောက်နိမ့်: D ခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့အမျိုးသမီးမျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်လူမှုရေးရာထူး,2 လွှမ်းမိုးမျောက်ထက်အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် (ဂရန် et al။ 1998) ။ ကျနော်တို့လာမယ့် D ကိုရှိမရှိအကဲဖြတ်2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုလူမှုရေးရာထူးခန့်မှန်းတဲ့ရို variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေအဘို့ကျနော်တို့စမ်းသပ်မှုတွေအနုံ 20 အသုံးပြုတစ်ဦးချင်းစီအထီး cynomolgus မျောက်သျော။ [သုံးပြီးအခြေခံပေ Scan ဖတ်ပြီးနောက်18F ကို] FCP ကောက်ယူခဲ့ကြသည်, မျောက် [ကလောင်နှုန်းလေးမျောက်များ၏လူမှုရေးအုပ်စုများ၌ထားကြ၏နှင့်သုံးလအကြာနှင့်အတူ rescanned ခဲ့ကြသည်18F ကို] FCP (မော်ဂန် et al။ 2002) ။ : D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူးများအတွက်ရိုအမှတ်အသားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ လူမှုရေးအိမ်ယာ၏သုံးလကြာပြီးတဲ့နောက်ကျနော်တို့အစီရင်ခံခဲ့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိ ဂရန် et al။ (1998)3နှစ်ကျော်-လက်အောက်ခံမျောက်နိမ့်: D ခဲ့မှုအတွက်အတူတကွနေထိုင်နေခဲ့အမျိုးသမီးမျောက်တွေကို2 လွှမ်းမိုးမျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ သို့သော်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားခဲ့ရာမှတစ်ဦးထုံးစံဆန့်ကျင်ဘက်ခန့်သို့ရောက်ကြ၏။ ကျနော်တို့အနိမ့်: D ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်2 လွှမ်းမိုးမျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လက်အောက်ခံမျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် (ပြတ်ပြတ်သားသားလက်အောက်ခံမျောက်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့ကြောင်းနာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သညျထKaplan et al။ 1982; Shively & Kaplan ၁၉၈၄) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုမှာကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြား 20 ကျော်% ခြားနားချက်သိသိသာသာကြောင့်ခဲ့ တိုးမြှင့်လာသည် : D အတွက်2 လက်အောက်ငယ်သားသော်လည်းကြီးစိုးမျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ပျမ်းမျှအားဖြင့်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ : D တွင်ဤတိုး2 DA function ကို-အပါအဝင်တိုးမြှင့်: D အပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသရုပ်ပြကြွက်လေ့လာမှုများအစီရင်ခံအဖြစ်အစီအမံတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်ရှိကြ၏2 အဲဒီ receptor DENSITY (ဥပမာ ဘိုးလင်း et al။ 1993; Rilke et al။ 1995; ခန်းမ et al။ 1998) ။ ဤအကြွက်လေ့လာမှုများအပေါ်နဲ့ D အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကွောငျးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ကျနော်တို့လက်အောက်ခံမျောက်အဓိကမျောက်ထက်ပိုမိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲမယ်လို့တွေးဆ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက် (ထွက်ဘွားမြင်ခဲ့သည်မော်ဂန် et al။ 2002) ။ အားဖြည့်ထားတဲ့ FR 50 အချိန်ဇယားအောက်တွင်အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့, ကိုကင်း (မြင်ကြီးစိုးမျောက်အတွက်စစ်ကူမဟုတ်ခဲ့ Nader & Czoty 2005 ) အပိုဆောင်းဆွေးနွေးမှုသည်။
ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့လူမှုရေးရာထူး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ရို variable တွေကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တွေးဆသောအခြားအပြုအမူတွေကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးလေ့လာမှုမှာ (မော်ဂန် et al။ 2000), locomotor လှုပ်ရှားမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာလက်အောက်ခံမျောက်တွေကိုနောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူးနောက်ဆုံးကြီးစိုးမျောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပိုမိုမြင့်မား locomotor ရမှတ်ခဲ့ဟောကိန်းထုတ်; စိတ်ဝင်စားစရာဤ (အမျိုးသမီးမျောက်မှတိုးချဲ့မဟုတ်ခဲ့Riddick et al။ တင်သွင်း) ။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, ငါတို့ဥပမာ (ကြွက်များတွင်ပိုမိုမကြာသေးမီအလုပ်တိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် Impulse အကဲဖြတ်ရန်ယူဆအပြုအမူတွေကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ရွက်မှုများတိုးချဲ့ပါပြီ ပယ်ရီ et al။ 2005; Dalley et al။ 2007) ။ စမ်းသပ်မှုတွေအနုံများနှင့်တစ်ဦးချင်းသျောအမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်၏အုပ်စုတစုအတွက်, ကျနော်တို့ (ကြိုတင်လူမှုရေးအရသျောခံရဖို့တစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်အတွက် Impulse အကဲဖြတ်ရန်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထု reactivity ကိုတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကိုအသုံးပြုRiddick et al။ တင်သွင်း) ။ နောက်ဆုံးမှာလက်အောက်ခံဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျောက်နောက်ဆုံးကြီးစိုးအမျိုးသမီးမျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုချဉ်းကပ်ဖို့တိုတောင်း latency ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုတောင်းအောင်းနေချိန် သာ. ကြီးမြတ် Impulse ကိုယ်စားပြုတွေးဆသည်။ အားဖြင့်ကြွက်များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ပိုမိုထကြွလွယ်သောမျောက်လည်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ပိုအားနည်းချက်ရှိမရှိ ပယ်ရီ et al။ (2005) နှင့် Dalley et al။ (2007) လက်ရှိတွင်အကဲဖြတ်နေပါသည်။
(ii) ပတ်ဝန်းကျင် interaction က× ORGANIZATION: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 2
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးအရသျောအထီးမျောက်တှငျကြှနျုပျတို့နောက်ထပ်လူ့အခွအေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ homologous မော်ဒယ်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်အစောပိုင်းကအလုပ်တိုးချဲ့ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်အဓိကအားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများပြောင်းလဲနေတဲ့အာရုံစိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကို (လွှမ်းမိုးမျောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကင်းရန်အစဉ်အမြဲထိတွေ့မှုအားဖြင့် attenuated နိုင်ရှာတွေ့Czoty et al။ 2004) ။ စပိုင်းတွင် FR 50 အချိန်ဇယားကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှုန်းထားများအတွက်ကွဲပြားမှုရှိကြ၏နေချိန်မှာအဲဒီ (ဖြစ်ပါသည်မော်ဂန် et al။ 2002), တစ်ဦး 1 နှစ်ကာလအတွင်းကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့ခြင်းကြီးစိုးမျောက်အတွက်စစ်ကူဖြစ်လာကင်းမှု (ဥပမာကိုကြည့်ပါ ကိန်းဂဏန်း 2a) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုမတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုလည်းမ: D ၏နှစ်လပေါင်းများစွာပြီးနောက်2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (လက်အောက်မျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြီးစိုးအတွက်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်Czoty et al။ 2004) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရိုးရှင်းတဲ့အချိန်ဇယားအစွမ်းသတ္တိကိုအားဖြည့်ဖို့ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်မပေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ (များ၏အခြေအနေတွင်မရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးသောကင်းအတွက်အခြေအနေများအောက်တွင်လူမှုရေးရာထူးများအကြားခြားနားချက်များရှိပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်Czoty et al။ 2005) ။ ကျနော်တို့ (သူတို့ကြီးစိုးမျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်အစားအစာကျော်ကင်းတဲ့နိမ့်ထိုးရှေးခယျြမယ်လို့ထိုကဲ့သို့သော, လက်အောက်ခံမျောက်ကဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုပြီးသိသိသာသာကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ကိန်းဂဏန်း 2b) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် organismal နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် interaction ကအတော်ကြာအရေးကြီးသောရှုထောငျ့ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိ၏အတိုင်းအတာအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အတိုင်းအတာထက်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များသည်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်ထောက်ခံပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤတွေ့ရှိချက်သည်ဤတည်ငြိမ်အုပ်စုများအတွက်လူနေမှုနှစ်ကြာလူမှုရေးအခြေအနေတွင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနေဆဲသိသာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။
(aတစ်ဦးကြီးစိုးအထီးမျောက် (ကို C-5386 အတွက်) ကင်းထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး) ။ လူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းတည်ငြိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်ဖြည့်စက်ဝိုင်း (ကနဦး) မှအဆင်ပြေအောင် (မကြာမီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် မော်ဂန် et al။ 2002); ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်းပြန်လည်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုကင်းထိုး-တုံ့ပြန်မှုများမှာ ...
မကြာခဏမေးခဲ့တယ်ကြောင်းတစ်ဦးကမေးခှနျးက '' အခွအေနကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်တစ်ဦးကြီးစိုးမျောက်လက်အောက်ခံဖြစ်လာသည်နှင့်လက်အောက်ခံမျောက်ကြီးစိုးဖြစ်လာလျှင်အဘယ်သို့နည်း '' ဖြစ်ပါသည် ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့တဦးတည်းကလောင်လေးယခင်ကကြီးစိုး (ပထမ-အဆင့်) မျောက်ပါဝင်သည်နှင့်အခြားကလောင်လေးယခင်ကလက်အောက်ခံ (စတုတ္ထအဆင့်) မျောက်တက်ခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့အုပ်စုများကျန်နေသေး။ အပိုဆောင်းခြံအလယ်အလတ် (ဒုတိယနှင့်တတိယ-အဆင့်) မျောက်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းနုံမျောက် (၏ရေးစပ်ခဲ့သည်Czoty et al။ ပြင်ဆင်မှုအတွက်) ။ ဤအအသစ်များကိုအခြေအနေများအောက်တွင်လူမှုရေးအိမ်ယာ၏သုံးလပွီးနောကျ, PET လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ယောက်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အစားအစာတွေနဲ့အားဖြည့်များ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါအချိန်ဇယားကိုအောက်မှာလေ့လာခဲ့သည်။ အသစ်သောလူမှုရေးရာထူးနှင့် D ကိုကြားဆက်ဆံရေး2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုထင်ရှား-ကြောင့်မဟုတ်ခဲ့သည်အသစ်ကြီးစိုးမျောက်: D ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ2 အသစ်လက်အောက်ခံမျောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ (မှတ်ချက်, အလွှမ်းမိုးမျောက်အချို့ယခင်ကလက်အောက်ခံခဲ့ကြသည်နှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အချို့တစ်ချိန်ကကြီးစိုးခဲ့ကြသည်။ ) ဒါ့အပြင်အဆိုပါမျောက်အကြားကင်းရွေးချယ်မှုမကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ ဝတ္ထုအရာဝတ္ထု reactivity ကိုအပါအဝင်အခြားအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအသုံးပြုပြီးအပိုဆောင်းလေ့လာမှုများ, ယခင်ရာထူးလက်ရှိရာထူးထက်ရလဒ်ပိုမိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အမူအကျင့်များနှင့် pharmacological သမိုင်းလွှမ်းမိုးအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားကျယ်ပြန့်စာပေတွေ (ဥပမာရှိပါတယ် Barrett et al။ 1989) နှင့်ထိုအလေ့လာမှုများလူမှုရေး interaction ကတစ်သမိုင်းထည့်သွင်းရန်သူတို့အတွေ့ရှိချက်ကိုတိုးချဲ့ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်×သက်ရှိများ၏နောက်ထပ်ဥပမာလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်နောက်ဆက်တွဲကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်သူတို့အားသက်ရောက်မှုများ၏အကျိုးဆက်အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ဖို့လူမှုရေးအရသျောမျောက်၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှင့်အတူလူမှုရေးရာထူးများ၏အပြန်အလှန်တခုတခုအပေါ်မှာကျယ်ပြန့်စာပေတွေ (ဥပမာရှိပါတယ် Smith & Byrd 1985; မာတင် et al။ 1990; အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Miczek et al။ 2004) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Miczek နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ (ဥပမာ Miczek & Yoshimura 1982; Miczek & Gold ၁၉၈၃a) အရက်, စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်း၏သက်ရောက်မှုလူမှုရေးရာထူးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်လွှမ်းမိုးမှုနိုင်ပြသခဲ့ကြသည်။ (တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာWinslow & Miczek 1985), လွှမ်းမိုးမျောက်တို့ကကျူးကျော်အတွက်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်အရက်၏အလယ်အလတ်ဆေးများမှအနိမ့်, ဒါပေမယ့်လက်အောက်ခံတိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ကျူးကျော်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်။ သို့သော်လက်အောက်ခံမျောက်မှအရက်နှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏ Co-အုပ်ချုပ်ရေးကျူးကျော်အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Crowley et al။ (1974, 1992) မျောက်များ၏လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးအများအပြား၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကြွဆေးစက်ခေါင်းများနှင့်ကျပုံစံအတွက်အသံထွက်တိုးထုတ်လုပ်များနှင့်အစားအစာ-forage အပြုအမူများနှင့်ကျူးကျော်အတွက်ငြင်းပယ်။ နိမ့်အဆင့်မျောက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးမြင့်မားဆေးများမူးယစ်ဆေး-ကုသတိရိစ္ဆာန်ဆီသို့ (တည်းကကုသမှုမရှိဘူး) ကြီးစိုးမျောက်ကနေညွှန်ကြားထားကျူးကျော်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းလကျအောကျခံအပြုအမူတွေအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလေးနက်တဲ့တိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရှိသမျှကိုလေ့လာမှုတွေ, ဤရလဒ်တည်းကကုသမှုမရှိဘူးမျောက်များ၏အမူအကျင့်များအနည်းငယ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးအရသျောမျောက်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဆေးများတိုးလာကျူးကျော်နှင့်လူမှုရေးရာထူးအပြောင်းအလဲများအတွက်ရလဒ်သည်မှန်လျှင်, ထိုမျောက်အတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းနောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများအတွက်ကိုတိုးမြှင့်မည်ဟုသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
မျောက်သုံး၏တည်ငြိမ်လူမှုရေးအုပ်စုများတှငျနထေိုငျနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့လူမှုရေးအဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုဘောပင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေအဘို့, လူမှုအုပ်စုတွင်တစ်ဦးတည်းသာမျောက်ကိုကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့် (ဆား, 0.01-0.1 ပေးထားခဲ့သည် mg kg-1 ဆေးထိုး-1) အားဖြည့်ထားတဲ့ FR 50 အချိန်ဇယားကိုအောက်, ဘောပင်အတွက်ကျန်ရှိနေသောမျောက်တစ်ဦး FR 50 အချိန်ဇယားအောက်တွင်အစားအစာတင်ဆက်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့စဉ်; အခြေအနေများငါးနှစ်ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီ session ပြီးစီးသောအခါမျောက်ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့များနှင့် agonistic မှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်နှင့်အလကျအောကျခံအပြုအမူတွေဟာ 15 ကျော်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မိကာလ။ (လွှမ်းမိုးအလယ်အလတ်နှင့်လက်အောက်ခံ) အားလုံးမျောက်အားလုံးကင်းဆေးများမှာလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။ လူမှု interaction ကမည်သည့်မျောက်များအတွက်တုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများသို့မဟုတ်ကင်းစားသုံးမှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများမျောက်များ၏ရာထူးအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြသည်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကလောင်အမည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းထဲမှာထားတဲ့တိရစ္ဆာန်, အ first- နှင့်ဒုတိယ-အဆင့်မျောက်ကျူးကျော်အတွက်တိုးမြှင့်ပြသ; အဆိုပါလက်အောက်ခံမျောက်လေ့လာမှု၏သင်တန်းကာလအတွင်းမည်သည့်ကျူးကျော်သရုပ်ပြဘူး။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလူမှုရေးအဆင့်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများအရေးကြီးဆုံးပစ်မှတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလူမှုရေးအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကိုမှအာရုံမခံစားနိုင်သောခဲ့ကြောင်းတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းပြချက်ကင်း access ကိုလူမှုရေးအပြန်အလှန်ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 24 နာရီသည်အထိစီစဉ်ထားမခံခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လက်ရှိလေ့လာမှုများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာအချိန်အတွက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏အကျိုးဆက်များကိုဆန်းစစ်နေကြသည်။
2 ။ နိဂုံး
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖျန်ဖြေအများအပြားအရေးကြီးသောအချက်များမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ, နိမ့်ဆုံးအဖြစ်အချို့သောလက်တွေ့ရလဒ်ကို၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (တွေ့မြင်ဖြစ်ကောင်းသုတေသီများမှရရှိနိုင်မယ့်လူ့အခွအေနေ၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာ Griffiths က et al။ 1980) ။ Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလူမှုရေးအပြုအမူပါဝင်သည်ကြသောအခါ, ဤမော်ဒယ်များလူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု homologous မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကအားနည်းချက် phenotype မှရို variable တွေကိုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းအမူအကျင့်များနှင့် neuropharmacological variable တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းလေ့လာမှုများဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းလူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်တိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားကြောင်းအပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေများဖော်ပြခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်ဒယ်များစဉ်းစားတဲ့အခါ, သုတေသီများမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်သောအချက်များပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုအချိန်အတန်ကြာလူသိများကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးဆေးခန်းသိသိသာသာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု attenuate နိုငျသောနားလည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မသာပါက (အခြားရွေးချယ်စရာ Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူအားနည်းချက်လျော့နိုင်သည်ကိုပြသထားသည်ကာရိုး et al။ 1989) နှင့်ကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်ရေး (Nader & Woolverton) ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 1991, 1992), မကြာခဏသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသောဤအခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူနှင့်အတူသို့သော်အတွေ့အကြုံက, အလှနျကိုကင်းအားဖြည့်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဥပမာအဖြစ်ကျနော်တို့လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုကိုကင်းအားဖြည့်ပေါ်ဤအကြောင်းမတူကွဲပြားသက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြနှစ်ခုပဏာမလေ့လာမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သည်အခြားမျောက်များ၏တစ်ဦးကလောင်အမည်သို့တစ်ခုကျူးကျော်ဖြစ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သော acute ဖိအား, (ကြည့်ရှု Miczek & Gold ၁၉၈၃b; Miczek & Tidey ၁၉၈၉) ကိုကင်း၏အားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အချက်အလက်သည်ပဏာမဖြစ်သော်လည်းတည်ရှိပြီးဖြစ်သောလူမှုအုပ်စုတွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများ၏လူမှုအဆင့်အတန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ လက်အောက်ငယ်သားမျောက်တစ် ဦး သည်လူမှုရေးအရကျက်စားသောအထီးလေးမျောက်၏ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောဘောပင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအခါလက်အောက်ငယ်သားတိရိစ္ဆာန်၏ကိုကင်းဆေးထိုး - တုန့်ပြန်မှုကွေးသည်ဘယ်ဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးကြီးစိုးသောမျောက်တစ်ကောင်နှင့်အတူကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများသည်လည်းလက်ယာဘက်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် အဆိုပါကိုကင်းထိုး - တုံ့ပြန်မှုကွေး၌တည်၏။ အခြားအဆုံးတွင်မျောက်များ (လူမှုအဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲ) ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မလေ့လာမီ ၃ ရက်အတွက် ၀ တ္ထုများ ၀ တ္ထုများဖြင့်သိုလှောင်ခန်းများထဲသို့မျောက်များအားနေရာချထားခြင်းအားဖြင့်ကိုကင်းဆေးထိုး - တုန့်ပြန်မှုကွေး၏ညာဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ မတိုင်မီသန့်စင်ခွအေနအေမှအစားအစာကိုကျော်ရွေးချယ်။ မရှိတော့အားဖြည့်ခဲ့ကြသည် ဤတွေ့ရှိချက်များအရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုသည်အစဉ်အလာရှိသောတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသောမျောက်များပင်လျှင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အလွန်အမင်းအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကလူ့လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အခြားအားဖြည့်ဆေးများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းကကိုကင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုကြာရှည်စေသည် (Higgins 1997) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့သုတေသနတသမတ်တည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်, ဤဆိုးကျိုးများနှင့်အတူပါလာသော neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်နိုင်သည်ကိုပြသထားသည်။ ကျနော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းနှင့် pharmacotherapy များ၏ပေါင်းစပ်ကင်းစွဲကုသထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့အားလုံးစမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေးအမျိုးသားသုတေသနကောင်စီနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ မနိုးသစ်တောတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဝိတ်သစ်တောတက္ကသိုလ်က Non-လူ့မျောက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်စီမံကိန်းများ၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီထဲမှာဖော်ပြထားအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တို့ကဤတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာအကူအညီအဘို့ဤသုတေသနနှင့်ဆူ Nader, Tonya Calhoun, Mikki Sandridge, Michelle Icenhower နှင့်က Nicholas Garrett သူတို့ရဲ့ရှည်လျား-ရပ်တည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကို Ka Grant က, LJ Porrino, RH အ Mach, JR Kaplan နှင့် HD ကို Gage ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သုတေသနစီမံကိန်းများ။ ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ပြင်ဆင်မှုအနေဖြင့်သုတေသန NIDA ထောက်ပံ့ငွေ DA 10584, DA 017763, DA 14637 နှင့် DA 06634 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။
Appt SE မျောက်မော်ဒယ်၏အသုံးဝင်မှုသည်မီးယပ်သွေးဆုံးအမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးအတွက်ပဲပုပ်၏အခန်းကဏ္ateကိုစုံစမ်းရန်။ ILAR ဂျေ 2004; 45: 200-211 ။ [PubMed]
ဘဏ်များ ML, Sprague je, Kisor DF, Czoty PW, Nichols DE, 3,4-methylenedioxymethamphetamine အပေါ် Nader, MA Ambient အပူချိန်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ (MDMA) အထီးမျောက်တွေကို thermodysregulation နှင့် pharmacokinetics -induced ။ မူးယစ်ဆေး Dispos ။ Metab ။ 2007; 35: 1840-1845 ။ Doi: 10.1124 / dmd.107.016261 [PubMed]
Barrett je, Glowa JR, Nader, MA အပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအရေးယူအတွက်သည်းခံစိတ်အရေးကြီးတဲ့ကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များ၏ဆုံးအဖွတျအဖြစ် pharmacological သမိုင်း။ ခုနှစ်တွင်: Goudie AJ, Emmett-Oglesby မဂ္ဂါဝပ်, အယ်ဒီတာများ။ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ Humana စာနယ်ဇင်း; Clifton, NJ: 1989 ။ စစ။ 181-219 ။
Berger B, Gaspar P ကို, အနှောက် cortex ၏ Verney C. Dopaminergic innervation: ကြွက်နှင့်မျောက်ဝံများအကြားမျှော်လင့်မထားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1991; 14: 21-27 ။ doi:10.1016/0166-2236(91)90179-X [PubMed]
ဘိုးလင်း SL, Rowlett JK, Bardo MT စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှု, dopamine ပေါင်းစပ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1993; 32: 885-893 ။ [PubMed]
အပန်းဖြေကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းတစ်ဦး nonhuman မျောက်မော်ဒယ်အတွက် Bradberry CW ထူးခြားသောနှင့်နာတာရှည် dopamine ဒိုင်းနမစ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2000; 20: 7109-7115 ။ [PubMed]
ကာရိုး ME, လက်ခ် ST, Nygaard SL တစ်ဦးကတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင် nondrug စစ်ကူဝယ်ယူကာကွယ်ပေးသည်သို့မဟုတ်ကင်း-အားဖြည့်အပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology ။ 1989; 97: 23-29 ။ Doi: 10.1007 / BF00443407 [PubMed]
Chalon S က, Edmond P ကို, Bodard S က, Vilar အမတ်, Thiercelin ကို C, Besnard JC, Builloteau ဃအချိန် striatal dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အပြောင်းအလဲများသင်တန်းနှင့် D ကို2 ပါကင်ဆန်ရောဂါကြွက်၏ပုံစံတွင်တိကျသောအိုင်အိုဒင်းအမှတ်အသားများပါရှိသည်။ Synapse ။ 1999; 31: 134-139 ။ doi:10.1002/(SICI)1098-2396(199902)31:2<134::AID-SYN6>3.0.CO;2-V [PubMed]
Crowley တီဂျေ, Stynes ​​AJ, Hydinger M က, Kaufman IC အီသနော, စိတ်ကြွဆေး, pentobarbital, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်မျောက်လူမှုရေးအပြုအမူ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1974; 31: 829-838 ။ [PubMed]
Crowley တီဂျေ, Mikulich SK ကို, Williams ဟာ EA ၏, Zerbe GO, Ingersoll NC ကင်း, လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်မျောက်များအတွက်အရက်-ဖြေရှင်းချက်သောက်သုံးရေ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1992; 29: 205-223 ။ doi:10.1016/0376-8716(92)90094-S [PubMed]
Czoty PW, Ginsburg ဘီစီ, ရှဉ့်မျောက်များအတွက်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့် neurochemical သက်ရောက်မှု၏ Howell ll Serotonergic ကို attenuation ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2002; 300: 831-837 ။ Doi: 10.1124 / jpet.300.3.831 [PubMed]
Czoty PW, မော်ဂန်: D, Shannon EE, Gage, HD, dopamine ၏ Nader, MA စရိုက်လက္ခဏာတွေ: D1 နဲ့ D2 လူမှုရေးအရသျော cynomolgus မျောက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းထဲမှာအဲဒီ receptor function ကို။ Psychopharmacology ။ 2004; 174: 381-388 ။ Doi: 10.1007 / s00213-003-1752-z [PubMed]
Czoty PW, McCabe ကို C, တစ်ဦးရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးလူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိ၏ Nader, MA အကဲဖြတ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2005; 312: 96-102 ။ Doi: 10.1124 / jpet.104.073411 [PubMed]
Czoty PW, Gage, HD, Nader SH, Reboussin BA, ခညျြနှောငျ M က, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Nader, MA သိမ်းယူမှု: D dopamine ပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး2 မျောက်တွေကိုအတွက်အဲဒီ receptor သို့မဟုတ် Transporter ရရှိနိုင်မှု။ ဂျေစွဲ။ Med ။ 2007a; 1: 33-39 ။ doi:10.1097/ADM.0b013e318045c038 [PubMed]
Czoty PW, Reboussin BA, Calhoun TL, Nader SH, Nader, MA long-term ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး fixed-အချိုးအစားနှင့်မျောက်တွေကိုဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားအောက်မှာ။ Psychopharmacology ။ 2007b; 131: 287-295 ။ Doi: 10.1007 / s00213-006-0665-z [PubMed]
dopamine D2008 receptor ရရှိနိုင်မှုအပေါ် menstrual သံသရာအဆင့်၏ MA2အကျိုးသက်ရောက်မှု Czoty, PW, Riddick, NV, Gage, HD, Sandridge, M. , Nader, SH, Garg, S. , Bounds, M. , Garg, PK & Nader, MA XNUMX ။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်များ။ Neuropsychopharmacology (Doi: 10.1038 / npp.2008.3) [PubMed]
ပြင်ဆင်မှုများအတွက် Czoty, PW, Nader, SH, Gage, HD & Nader, MA ။ dopamine D အပေါ်လူမှုရေးပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု2 လူမှုရေးအရသျောအထီး cynomolgus မျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။
et al Dalley JW ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 1267-1270 ။ Doi: 10.1126 / science.1137073 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1988; 85: 5274-5278 ။ Doi: 10.1073 / pnas.85.14.5274 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dworkin SI, Mirkis S ကိုစမစ် je တုံ့ပြန်မှု-မှီခိုကင်း၏တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောတင်ဆက်မှုနှိုင်းယှဉ်: မူးယစ်ဆေးဝါး၏သေစေလောက်သက်ရောက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology ။ 1995; 117: 262-266 ။ Doi: 10.1007 / BF02246100 [PubMed]
Elkashef တစ်ဦးက, Biswas J ကို, Acri JB, Vocci အက်ဖ်ဇီဝနည်းပညာနှင့်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ကုသမှု။ BioDrugs ။ 2007; 21: 259-267 ။ Doi: 10.2165 / 00063030-200721040-00006 [PubMed]
Grant က ka, Shively, CA, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Morton TE, Gage, HD, လူမှုရေးအဆင့်အတန်း Mach RH အ Effect striatal dopamine အပေါ်: D2 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအကဲဖြတ် cynomolgus မျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ synapses ။ 1998; 29: 80-83 ။ doi:10.1002/(SICI)1098-2396(199805)29:1<80::AID-SYN7>3.0.CO;2-7 [PubMed]
Griffiths, RR, Bigelow, GE & Henningfield, JE 1980 တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူများ။ In ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတိုးတက်လာ, vol ။ 1 (ed ။ NK Mello), စစ။ 1-90 ။ ဂရင်းနစ်, CN: Jai နှိပ်ပါ။
Haber SN, McFarland ရော်ဘာ nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် ventral striatum ၏အယူအဆ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1999; 877: 33-48 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1999.tb09259.x [PubMed]
ခန်းမ FS, Wilkinson LS, Humby T က, Inglis W က, Kendall DA, Marsden, CA, ကြွက်များတွင်ပွုစုပြိုးထော Robbins TW အထီးကျန်ထားခြင်း: striatal dopaminergic စနစ်များအတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptic အပြောင်းအလဲများကို။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1998; 58: 859-872 ။ doi:10.1016/S0091-3057(97)00510-8 [PubMed]
Higgins ST ကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအပေါ်အခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1997; 57: 419-427 ။ doi:10.1016/S0091-3057(96)00446-7 [PubMed]
Howell ll, Wilcox KM Functional ပုံရိပ်နှင့်မျောက်ဝံများအတွက်လှုံ့ဆော် Self-အုပ်ချုပ်ရေး neurochemical Correlate ။ Psychopharmacology ။ 2002; 163: 352-361 ။ Doi: 10.1007 / s00213-002-1207-y က [PubMed]
Jewitt DA, Dukelow WR သိသိနှင့်ကိုယ်ဝန်အရှည် Macaca fascicularis။ မျောက်ဝံများ။ 1972; 13: 327-330 ။ Doi: 10.1007 / BF01730578
ယောလ: D, Weiner ဗြဲကြွက်များနှင့်မျောက်ဝံများအတွက် striatum နှင့်အတူ dopaminergic စနစ်၏အဆိုပါဆက်သွယ်မှု: အ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် compartmental အဖွဲ့အစည်းကမှလေးစားမှုနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience ။ 2000; 96: 451-474 ။ doi:10.1016/S0306-4522(99)00575-8 [PubMed]
Johanson အီး, Schuster CR မူးယစ်ဆေးစစ်ကူများအတွက်တစ်ဦးကရှေးခယျြမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း: အမျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းနှင့်အ methylphenidate ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1975; 193: 676-688 ။ [PubMed]
Kaplan JR, Manuck SB, သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်တီဘီ, Lusso FM ရေ, Taub DM လူမှုရေးအခြေအနေ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် cynomolgus မျောက်တွေကိုသွေးကြော။ Arterosclerosis ။ 1982; 2: 359-368 ။ [PubMed]
အဆိုပါရှဉ့မျောက်အတွက်အသားကိုကင်းဆေးထိုး၏ Katz JL ဒုတိယအယူမှုကိုအချိန်ဇယား: အစားအစာတင်ဆက်မှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် promazine ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1980; 212: 405-411 ။ [PubMed]
Lile ဂျာဝမ် Z ကို, Woolverton WL, ပြင်သစ် je, Gregg TC, ဒေးဗီးစ် HML, Nader, MA မျောက်တွေကိုအတွက် psychostimulants ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှု: pharmacokinetics နှင့် pharmacodynamics ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2003; 307: 356-366 ။ Doi: 10.1124 / jpet.103.049825 [PubMed]
မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအားနည်းချက်အတွက် Lynch WJ လိင်ကွဲပြားမှု။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2006; 14: 34-41 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.14.1.34 [PubMed]
Lynch WJ, Roth ME, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏ကာရိုး ME ဇီဝအခြေခံ: preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ။ Psychopharmacology ။ 2002; 164: 121-137 ။ doi:10.1007/s00213-002-1183-2 [PubMed]
လီယွန်: D, Friedman DP, Nader, MA, Porrino LJ ကင်းမျောက်များ၏ ventral striatum နှင့် limbic cortex အတွင်းနှောက်ဇီဝြဖစ်ပွောငျးလဲ။ ဂျေ neuroscience ။ 1996; 16: 1230-1238 ။ [PubMed]
et al Mach RH အ။ 18အဆိုပါ dopamine D ကိုလေ့လာနေဘို့က F-တံဆိပ်ကပ် radioligands2 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအဲဒီ receptor ။ ဂျေ Med ။ Chem ။ 1993; 36: 3707-3720 ။ Doi: 10.1021 / jm00075a028 [PubMed]
မာတင် SP, Smith က EO, ကျူးကျော်အတွက် D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုးအပေါ်ကြီးစိုးရာထူး၏ Byrd တို့ပါပဲ ld အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1990; 37: 493-496 ။ doi:10.1016/0091-3057(90)90018-D [PubMed]
Martinez: D, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုနဲ့ D2 အဆိုပါ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ကင်း-ရှာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1190-1202 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300420 [PubMed]
လူမှုရေးနှင့် agonistic အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု, ရွေ့လျားနှင့် stereotypies: ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုအဆင့်အတန်းရှဉ့်မျောက်တွေကို Miczek Ka, ရွှေ LH ဃ-ဖက်တမင်းဆေးပြား။ Psychopharmacology ။ 1983a; 81: 183-190 ။ Doi: 10.1007 / BF00427259 [PubMed]
Miczek Ka, ရှဉ့်မျောက်များအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ဆောင်ချက်ရွှေ LH Ethological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Saimiri sciureus) ခုနှစ်တွင်: Miczek Ka, အယ်ဒီတာ။ Ethopharmacology: အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်၏မျောက်မော်ဒယ်များ။ အလန် R. Liss; နယူးယောက်, NY: 1983b ။ စစ။ 137-155 ။ [PubMed]
Miczek, KA & Tidey, JW 1989 Amphetamines: ရန်လိုခြင်းနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ။ In စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆက်စပ်ဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒ (eds K. Asghar & E. De Souza) ။ NIDA သုတေသန Monograph မရှိ။ 94, စစ။ 68-100 ။ ဝါရှင်တန်ဒီ။
Miczek Ka, D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းများကမျောက်လူမှုရေးအပြုအမူ၏ Yoshimura အိပ်ချ် Disruption: antipsychotics အားဖြင့် differential ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ Psychopharmacology ။ 1982; 76: 163-171 ။ Doi: 10.1007 / BF00435272 [PubMed]
Miczek Ka, Covington သူ, Nikulina အီး, Hammer RP မှထုတ်ပြန်သောနှင့်ရှုံးနိမ့်: peptidergic နှင့် aminergic mesocorticolimbic ဆားကစ်အတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ် Persistent ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004; 27: 787-802 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.11.005 [PubMed]
Mills က, ဂျေ 1965 အပ်ပန်းခြံ။ ဘဝမဂ္ဂဇင်း,5မတ်လ။
Moeller အပြည်ပြည်သွား, Dougherty DM, Barratt ES, Oderinde V ကို, Mathias CW, Harper ကို RA, Swann AC အ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်ကျူးကျော်များ၏လွတ်လပ်သောကင်းမှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Impulse တိုးမြှင့်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2002; 68: 105-111 ။ doi:10.1016/S0376-8716(02)00106-0 [PubMed]
မော်ဂန်: D, Grant က ka, Prioleau oa, Nader SH, Kaplan JR, cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးအဆင့်အတန်း Nader, MA ခန့်မှန်း (Macaca fascicularis) အုပ်စုတစ်စုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်။ နံနက်။ ဂျေ Primatol ။ 2000; 52: 115-131 ။ doi:10.1002/1098-2345(200011)52:3<115::AID-AJP1>3.0.CO;2-Z [PubMed]
မော်ဂန်: D, et al ။ မျောက်များအတွက်လူမှုကြီးစိုး: dopamine: D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ နတ်။ neuroscience ။ 2002; 5: 169-174 ။ Doi: 10.1038 / nn798 [PubMed]
et al Munro, CA ။ ကျန်းမာလူကြီးများအတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 59: 966-974 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2006.01.008 [PubMed]
Nader, MA, dopamine ၏ Czoty PW ပေပုံရိပ်: D2 မျောက်တွေကို receptors: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မော်ဂျူ vs. မျိုးဗီဇ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1473-1482 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.8.1473 [PubMed]
Nader, MA, nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် Czoty PW ဦးနှောက်ပုံရိပ်: မူးယစ်ဆေးစွဲသို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ ILAR ။ 2008; 49: 89-102 ။ [PubMed]
Nader, MA, တစ်ဦး discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးရွေးချယ်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ၏ပြင်းအားတိုးပွားလာ၏ Woolverton WL အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1991; 105: 169-174 ။ Doi: 10.1007 / BF02244304 [PubMed]
Nader, MA, မျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းနှင့်အစားအစာအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်တိုးပွားလာ၏ Woolverton WL အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1992; 108: 295-300 ။ Doi: 10.1007 / BF02245115 [PubMed]
Nader, MA, Daunais JB, Moore က T က, Nader SH, Moore က RJ, Smith က HR, Friedman DP, striatal dopamine စနစ်များအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Porrino LJ အကျိုးသက်ရောက်မှုမျောက်တွေကိုအတွက်: ကနဦးနှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 35-46 ။ doi:10.1016/S0893-133X(01)00427-4 [PubMed]
Nader, MA, မော်ဂန်: D, Gage, HD, Nader SH, Calhoun T က, Buchheimer N ကို, Ehrenkaufer R ကို, dopamine ၏ Mach RH အပေပုံရိပ်: D2 မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း receptors ။ နတ်။ neuroscience ။ 2006; 9: 1050-1056 ။ Doi: 10.1038 / nn1737 [PubMed]
Nordstrom AL, Olsson H ကို, D ကို၏ Halldin C. တစ်ပေလေ့လာမှု2 ရာသီစက်ဝန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာ dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1998; 83: 1-6 ။ doi:10.1016/S0925-4927(98)00021-3 [PubMed]
O'Brien CP ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်ဆေးတိုက်ဆေးများ - ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ကိုထိရောက်သောဆေးဝါးအသစ်များ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1423-1431 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.8.1423 [PubMed]
O'Brien CP မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်း။ In: Brunton L, Lazo JS, Parker KL, အယ်ဒီတာများ။ Goodman နှင့် Gilman တို့သည်ကုထုံး၏ဆေးဝါးဗေဒအခြေခံဖြစ်သည်။ McGraw-Hill; နယူးယောက်, NY: 2006 စစ 607-627 ။ ။ ch ။ ၂၃ ။
ပယ်ရီ JL, Larson eb, ဂျာမန် JP, က Madden GJ, ကာရိုး ME Impulse (နှောင့်နှေးလျှော့) အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် IV ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူတစ်ဦးခန့်မှန်းသည်။ Psychopharmacology ။ 2005; 178: 193-201 ။ doi:10.1007/s00213-004-1994-4 [PubMed]
Piazza PV, Deminiere JM, Le Moal က M, စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းကိုရှိမုနျအိပ်ချ်အချက်များ။ သိပ္ပံ။ 1989; 245: 1511-1513 ။ Doi: 10.1126 / science.2781295 [PubMed]
Riddick, ရော်ဘာ et al တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းလွှမ်းမိုးမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ဝိသေသလက္ခဏာများ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rilke အိုမေလတွင် T က, Oehler J ကို, D ကို၏စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်အိမ်ယာအခြေအနေများနှင့်အီသနောစားသုံးမှု၏ Wolffgramm ဂျေသွဇာ2, 5-HT1Aကြွက်များ၏နှင့် benzodiazepine receptors ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1995; 52: 23-28 ။ doi:10.1016/0091-3057(95)00093-C [PubMed]
Ritz MC, သိုးသငယ် RJ, Goldberg က SR, dopamine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ် Kuhar MJ ကင်း receptors ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ သိပ္ပံ။ 1987; 237: 1219-1223 ။ Doi: 10.1126 / science.2820058 [PubMed]
ရောဘတ် DCS, Phelan R ကို, Hodges LM, Hodges MM, Bennett က BA, Childers SR, ကိုကင်း analog ၏ဒေးဗီးစ်အိပ်ချ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 1999; 144: 389-397 ။ Doi: 10.1007 / s002130051022 [PubMed]
SAMHSA: ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးန်ဆောင်မှုများအုပ်ချုပ်ရေး 2006 မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2005 အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းကနေရလာဒ်: အမျိုးသားရေးတွေ့ရှိချက် NSDUH စီးရီးကို H-30, DHHS ထုတ်ဝေမှုမပါ။ SMA 06-4194 ။ Rockville, MD: အသုံးချလေ့လာရေးရုံး, SAMHSA ။
Sandberg ဂျာကိုယ်ဝန်ဆောင် guinea ဝက်အတွက် Olsen GD ကင်း pharmacokinetics ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1991; 258: 447-482 ။ [PubMed]
Seeman သင်္ဘော MV Schizophrenia, ကျား, မ, နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ နိုင်သလား။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996; 41: 263-264 ။ [PubMed]
Shively ကို C, adrenal အလေးချိန်နှင့်ဆက်စပ်ဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ်လူမှုရေးအကြောင်းရင်းများ၏ Kaplan JR အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Macaca fascicularis။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 1984; 33: 777-782 ။ doi:10.1016/0031-9384(84)90047-7 [PubMed]
Sibley DR, Monsma FJ, Jr က dopaminergic receptors ၏ Shen Y. Molecular neurobiology ။ int ။ ဗျာ Neurobiol ။ 1993; 35: 391-415 ။ [PubMed]
လူမှုရေးအပြန်အလှန်ပုံစံများအတွက် Smith က EO, Byrd တို့ပါပဲ ld ဃ-ဖက်တမင်းဆေးပြားသွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1985; 22: 135-139 ။ doi:10.1016/0091-3057(85)90496-4 [PubMed]
Sofuoglu M က, Dudish-Poulsen S က, နယ်လ်ဆင်: D, Pentel PR စနစ်, Hatsukami DK လိင်နှင့်လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းကနေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများအတွက်ရာသီစက်ဝန်းကွဲပြားခြားနားမှု။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 1999; 7: 274-283 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.7.3.274 [PubMed]
Stefanski R ကို, Ladenheim B, Lee က SH, Cadet JL, အ dopaminergic စနစ် Goldberg က SR Neuroadaptations တက်ကြွ Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးသော်လည်းမစိတ်ကြွဆေး၏ passive အုပ်ချုပ်မှုအပြီး။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1999; 371: 123-135 ။ doi:10.1016/S0014-2999(99)00094-1 [PubMed]
Terner JM, က de ကျေးအိပ်ချ်ရာသီလာခြင်း cucle အဆင့်နှင့်လူသားအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006; 84: 1-13 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2005.12.007 [PubMed]
et al Volkow ND ။ postsynaptic dopamine receptors အပေါ်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုဆိုးကျိုးများ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990; 147: 719-724 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, Logan J ကို, Schlyer DJ သမား, Dewey SL, Wolf ကအေပီ: D dopamine လျော့နည်းသွား2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ synapses ။ 1993; 14: 169-177 ။ Doi: 10.1002 / syn.890140210 [PubMed]
et al Volkow ND ။ သွေးကြောသွင်း methylphenidate အားဖြင့် striatal dopamine ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ထားခြင်း "မြင့်သော" ဂျေ Pharmacol ၏ Self-အစီရင်ခံစာများသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Exp ။ Ther ။ 1999; 288: 14-20 ။ [PubMed]
ပေါင်းပင် MR, Woolverton WL ပေါလုသည်အိုဝါ Dopamine: D1 နဲ့ D2 မျောက်တွေကို striata အတွက် phenyl-benzazepines ၏ receptor ကိုရွေးချယ်ပါ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1998; 361: 129-142 ။ [PubMed]
Weerts EM, Fantegrossi WE, Goodwin ကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသုတေသနအတွက် nonhuman မျောက်ဝံများ၏တန်ဖိုးကို AK ။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2007; 15: 309-327 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.15.4.309 [PubMed]
WHO က။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်: 2004 ။ psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မှီခိုများ၏ neuroscience ။
Wieck တစ်ဦးက, ဒေးဗီးစ် RA, Hirst အေဒီ, Brown က N ကို, Papadopoulos တစ်ဦးက, Marks MN, Checkley လုပ် SA, Kumar က RC, puerperal စိတ်ကြွရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီး hypothalamic dopamine အဲဒီ receptor function ကိုအပေါ်မစ္စတာကမ်းဘဲလ် IC ရာသီလာခြင်းသံသရာဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 2003; 17: 204-209 ။ Doi: 10.1177 / 0269881103017002009 [PubMed]
Winslow JT, ရှဉ့်မျောက်တွေကိုရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ်အရက်ဆိုးကျိုးများ၏ပစ်မှတ်အဖြစ် Miczek Ka လူမှုအဆင့်အတန်း (Saimiri sciureus) Psychopharmacology ။ 1985; 85: 167-172 ။ Doi: 10.1007 / BF00428408 [PubMed]
et al Wong က DF ။ Vivo အတွက် positron ထုတ်လွှတ် tomography အားဖြင့်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine receptors ၏တိုင်းတာခြင်း။ အသက်အရွယ်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1988; 515: 203-214 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1988.tb32986.x [PubMed]
Woolverton WL, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုဂျွန်ဆင် KM Neurobiology ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ။ 1992; 13: 193-200 ။ doi:10.1016/0165-6147(92)90063-C [PubMed]
Woolverton WL, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ Nader, MA စမ်းသပ်အကဲဖြတ်။ ခုနှစ်တွင်: Adler မဂ္ဂါဝပ်, Cowan တစ်ဦးက, အယ်ဒီတာများ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်။ Wiley-Liss; နယူးယောက်, NY: 1990 ။ စစ။ 165-192 ။
Zernig, G, Wakonigg, G, Madlung အီး, ယုန်ကို C, Saria အေအော်ပရေတာအေးစက်လုပျထုံးလုပျနညျးအတွက်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်-ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းသလား "မူးယစ်ဆေးလို" ရန် "ာင်း" ဖော်ပြသလဲ Psychopharmacology ။ 2004; 171: 352-363 ။ doi:10.1007/s00213-003-1601-0 [PubMed]